Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » U diyaargarow khadadka markaad ka soo duusho London Heathrow
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Rabshadaha Heathrow: Dadweyne aad u fara badan ayaa buux dhaafiyey gegida dayuuradaha ee aan shaqaalaha lahayn
Qaar ka mid ah rakaabka Heathrow ayaa soo sheegayay waqtiyada safka gabi ahaanba aan macquul ahayn sababtuna tahay shaqaalaha Ciidanka Xuduudaha oo yaraaday taas oo dadka socotada ah saf ku sugaysay shan saacadood.
Yaraanta shaqaalaha ayaa horseedaysa khadadka waaweyn ee Heathrow.
Dadka socotada ah ayaa lagu qasbay inay saf ku sugaan shan saacadood.
Safafkii xirxirnaa waxay qatar COVID-19 u geysteen kumanaan rakaab ah oo diyaaradeed.
Shaqaalaha Xuduudaha oo ku yaraaday Gegida Diyaaradaha ee Heathrow ee London ayaa sababay khadad aad u weyn iyo gebi ahaanba la’aanta wax bulshada ka fogeeya toddobaadkan, maaddaama tirada kooban ee shaqaaluhu aysan awoodin inay la qabsadaan kuwa xadka ku sugan.
Rakaabka diyaaradda ee Madaarka Heathrow waxay si isdaba joog ah u soo mareen xaalado noocan oo kale ah tan iyo bilowgii masiibada COVID-19, laakiin Jimcihii, qaar ka mid ah dadka Ingiriiska ayaa soo sheegayay waqtiyada safka gabi ahaanba aan macquul ahayn sababtuna tahay yaraanta shaqaalaha Ciidanka Xuduudaha taas oo dadka safarka ah ku sugaysay safka shanta saacadood.
Hal qof oo rakaab ah ayaa xitaa la sheegay in uu miyir beelay intii ay fowdadu socotay.
Garoonka Heathrow ayaa ka jawaabay cabashooyinka isagoo ku andacoonaya in dib u dhacyadu ay sabab u yihiin Ciidanka Xuduudaha samaynta “Hubinta Cabbiraadda Caafimaadka si loo hubiyo in rakaabku u hoggaansamaan shuruudaha gelitaan ee ugu dambeeyay ee Dawladda UK.”
Gegida dayuuradaha ayaan wax ka qabanin kala fogaanshaha bulshada iyo safaf dhaadheer, oo buuxsan, si kastaba ha ahaatee, taas oo halis coronavirus ugu keentay kumanaan rakaab diyaaradeed ah.
Subaxnimadii Sabtida, dadka safarka ah ee ku sugan Terminal 5 ayaa baraha bulshada ku soo wariyay in safafkii ay dhinteen.
Sida ay ku warrantay warbaahinta maxalliga ah, ugu yaraan siddeed dhacdo oo kale oo safaf dhaadheer loo galay, dad badan oo ciriiri ah, iyo helitaanka biyo iyo tas -hiilaad musqul ayaa la diiwaan geliyey intii u dhaxaysay May iyo Sebtembar.
Bishii Diseembar 2020 - maalmo uun ka hor Kirismaska ​​- boqolaal rakaab ah ayaa ku hadhay xayiran gegida diyaaradaha ee Heathrow iyada oo duulimaadyadu ay buux dhaafiyeen iyada oo dadka reer Britain ay isku dayayaan inay ka baxsadaan xayiraadaha coronavirus ee Tier 4 oo dhowaan lagu dhawaaqay, taas oo ku khasabtay qoysaska inay guryahooda joogaan oo ay ka fogaadaan kuwa ay jecel yihiin xilliga fasaxa.